mairie-antananarivo – Fivoriana mikasika ny tetik’asa fanangonana ireo mombamomba ny tany sy ny trano miorina eto Antananarivo renivohitra na ny « projet de recencement des terrains et des propriétés bâties »
auteur 17 novambra 2017 Commentaires fermés
Nampahafantarina androany maraina, nandritran’ny fivorian’ny DMR (Direction de la Mobilisabilité des Réssources) ao amin’ny CUA teny Mahamasina ny mahakasika ilay fitaovana matihanina « Logiciel IFPB-IFT-V.3.0» izay hampiasain’ny kaominina Antananarivo Renivohitra tsy ho ela. Ny anton’izao dia ny mba hampahaingana sy hanamorana ny fanangonana ireo mombamomban’ny tany sy ny trano miorina eto an-dRenivohitra, izany dia niaraha-namolavola tamin’ny GIZ Allemand. Natoron’izy ireo ny fomba fampiasana azy sy ny vokatsoa haterakin’ny fampiasana azy. Nolazain’izy ireo fa efa eo andalam-pahavitana ilay logiciel, ary azo hampiasaina avy hatrany aorinan’ny validation na ny faneken’ny mpiara-miasa eto anivon’ny CUA azy.
Hisy araka izany ny fampianarana fohy hataon’ny GIZ ho an’ireo tena hampiasa azy mba tsy hampisy ny olana any aoriana, ary mba hampahomby ireo asa rehetra izay hatao. Araka ny voalaza, dia haparitaka sy hampiasaina manerana ny boriboritany enina ilay « logiciel » ka ny serveur centrale no hatao ety amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely.